Ma anaa Waalan Mise Cadan baa Laga heesayaa! – hogaanka.org
Somaliland’s lessons in peace for Africa
Ma anaa Waalan Mise Cadan baa Laga heesayaa!
Waxaa laga hayey in oday ah arintaa aan qoralkeygan sal dhiga uga dhigay.
Waxaa aad moodaa dadka qaarkood in ay aduunka hada yimaadeen oo aaney waxba ka ogeyn dhibaatooyinkii uu umada Somaliland u geystey keli taliyihii maxamed siyaad Bare.
Waxa yaabaha laga xishooda waxaa ka mida hadalka nin kan odayga ah ee weliba video yaha iska soo duubey oo uu Madaxweyne Muuse biixi uu siyaad bare barbar dhigayo .
Waxaa beryahan dambe isa soo taraya dad malaha u ooman in mar labaad maxamed siyaad bare ku soo noolaado oo ay dulcad iyo daroor qamidii qaxootiga ku cunaan.
Dadkaasi waa kuwo xijin kari la nicmada Allah(swt) uu ugu nicmeeyey ee Nabadu kow katahay, dhaqaalaha iyo horumarka gees walba, xoriyadu salka u tahay doorashooyinku astaan u yahiin waa kuwo raba in ay fidmo hor leh geliyaan qarankan Somaliland ee horumarey waa kuwo u oogan in taariikhda dib uGu noqoto xiligan ila daawo Video yahan:
Somaliland’s lessons in peace for Africa Previous
XUSUUS AAN LA ILAWI KARIN DOQONSE YEEL KADEED! Next